Nandefa olona an-tapitrisany tany Oganda sy sudan atsimo ny vondrona eropeana hiady amin'ny Ebola raha mbola milamina kosa ny fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nandefa olona an-tapitrisany tany Oganda sy sudan atsimo ny vondrona eropeana hiady amin'ny Ebola raha mbola milamina kosa ny fizahan-tany
Kenya, Oganda, South Sudan, ary ny Repoblika Demokratika dia mailo ary miatrika krizy mivoatra. I Oganda dia mijoro ho ohatra tsara misy ny fiparitahan'ny valan'aretina Ebola mahafaty any amin'ny faritanin'izy ireo ary miaro ny fizahan-tany ireo mpizahatany. Tsy mbola misy tranga Ebola any Kenya. Ny governemanta Kenya dia nanome vola mitentina 350 tapitrisa Sh (4 tapitrisa $) ho any Ebola any Kenya Fiomanana sy valiny. Kenya dia tsy voakasiky ny Ebola ny valanaretina amin'izao fotoana izao saingy mety ahiana hiparitaka noho ny toerany stratejika amin'ny maha foibe fitaterana an-habakabaka an-tany sy iraisam-pirenena.
Mijanona ho voaro hatrany ny fizahantany any Oganda sy Kenya, saingy miahiahy ireo mpandray anjara amin'ny indostria sy ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta ny vokadratsin'ity PR ity amin'ny media sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Izay rehetra miditra ao Oganda avy any Sudan atsimo dia hozahana arahana amin'ny Ebola.
Ny marary faharoa dia maty tany Oganda. Nandrara ny fivorian'ny besinimaro tany amin'ny distrikan'i Kasese andrefana ny County Afrikana Atsinanana satria manandrana mifehy ny otrikaretina ny tompon'andraikitra ary manao ezaka lehibe hiarovana ireo mpitsidika ao amin'io faritra io ihany koa. Oganda dia nanao vaksiny mpiasan'ny fahasalamana 4,700 150 tany amin'ny fotodrafitrasa maherin'ny XNUMX niaraka tamin'ny fanafody fanandramana natao hiarovana azy ireo amin'ny Ebola.
Ilay niharam-boina faharoa dia mpianakavin'ilay tovolahy maty 5 taona niampita ny sisin-tany mankany Ouganda miaraka amin'ilay virus taorian'ny nanatrehana fandevenana tao amin'ny RDC. Ny mpianakavy fahatelo dia tsaboina amin'ny fitsaboana mafy.
Raha mbola mitohy ny valanaretina any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, ny EU dia nanambara famatsiam-bola maika mitentina € 3.5 tapitrisa, izay € 2.5 tapitrisa dia ho an'i Oganda ary € 1 tapitrisa ho an'i Sodana atsimo. Ny fonosana fanampiana dia hanamafy ny fahitana haingana sy ny fihetsika amin'ny tranga Ebola. Ny famatsiam-bola anio dia eo anelanelan'ny 17 tapitrisa € amin'ny famatsiam-bola EU ho an'ny valin'ny Ebola nanomboka tamin'ny taona 2018 tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo ary ny hetsika fisorohana sy fiomanana any Oganda, South Sudan, Rwanda ary Burundi.
Christos Stylianides, Kaomisera misahana ny fanampiana ny mahaolona sy ny krizy ary ny mpandrindra ny Ebola ao amin'ny EU dia nilaza hoe: “Manao izay rehetra azontsika atao isika hamonjy ain'olona sy hampiatoana ny tranga hafa hatrany amin'ny Ebola. Androany, ny asany lehibe indrindra dia ny fanampiana ny Repoblika Demokratikan'i Kongo ihany, fa ny fanampiana ireo firenena mifanila toa an'i Oganda ihany koa. Eto, ny famatsiam-bola ataonay dia manampy amin'ny fanaraha-maso, fiaraha-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ary ny fanamafisana ny fahafaha-miasa eo an-toerana ho an'ireo firenena ireo handray andraikitra ara-potoana sy mahomby. Izahay dia manolo-tena hanohy ny fanampiantsika hamarana ity valanaretina ity raha mbola maharitra. "
Miara-miasa amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena hafa ary mifanaraka amin'ny drafitry ny valin-kafatra eran-tany momba ny Ebola ho an'ny Organisation Health and Organisation Health Organisation, ny famatsiam-bola avy amin'ny Vondrona Eropeana dia mandray anjara amin'ny fepetra tafiditra ao anatin'izany indrindra:
ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny aretina amin'ny sehatry ny fiarahamonina, tobim-pahasalamana ary toerana fidirana (teboka fiampitana sisintany);
ny fiofanana ekipa mpandray valin-kafatra haingana;
ny fiofanana momba ny mpiasa ara-pahasalamana sy ny laharam-pahamehana amin'ny fandinihana ny fifandraisana, ny fisorohana ny aretina sy ny fepetra fanaraha-maso, ny fanampiana ara-tsaina sy ny fandevenana azo antoka sy mendrika;
fananganana fahaiza-manao eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fampitaovana toeram-pitsaboana; SY
fanentanana ny mpiara-monina.
Ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana momba ny maha-olona eropeana ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, any Oganda ary any amin'ny faritra dia mandrindra ary mifandray isan'andro amin'ny manampahefana ara-pahasalamana any amin'ireo firenena ireo, ny World Health Organization ary ireo mpiara-miasa aminy.
Ny EU dia nanampy ny firenena teo amin'ny laharana voalohany hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina tamin'ny taona 2018, manome fanampiana ara-bola, manampahaizana, fampiasana ny serivisy sidina ECHO hanaterana entana ary nampandeha ny mekanisma fiarovana sivily eropeana.
Tamin'ny 11 Jona 2019, ny minisitry ny fahasalamana any Oganda dia nanamafy fa ny marary voalohany dia nanaporofo fa voan'ny aretina virus Ebola (EVD) any amin'ny distrikan'i Kasese, any atsimo andrefan'ny firenena. ireo faritra voakasik'izany ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo sy ireo firenena mifanila aminy, ny fandrahonana famindrana ny virus virus Ebola dia nohamarinin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ho avo dia avo hatrany.
Ny departemanta misahana ny fanampiana mahaolona EU miaraka amin'ny departemantan'i United Kingdom misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena dia manao iraka any atsimo andrefan'ny Oganda ankehitriny, miaraka amina manam-pahaizana momba ny fahasalamana isam-paritra avy amin'ny vaomiera eropeana.
Ny EU dia nanohana ara-bola ny fampandrosoana vaksinina Ebola sy ny fikarohana momba ny fitsaboana Ebola sy ny fitiliana diagnostika.
Japan Airlines dia mandray ny Airbus A350 XWB voalohany
Ahoana ny fiantraikan'ny fifaninanana havaozina eo amin'ny Airbus sy Boeing?